म्याराडोनालाई प्रत्यक्ष भेट्दाको त्यो क्षण
डिएगो म्याराडोनाको मृत्यु
जापान र कोरियाले पहिलोपटक एसियामा फिफा विश्वकप फुटबलको आयोजना गरेको थियो। सन् २००२ को उक्त प्रतियोगितामा मैले फिफाको अनुशासन समितिमा रहेर काम गर्ने मौका पाएको थिए।
सम्भवत एसियाबाट म एक्लो प्रतिनिधि थिएँ। फिफाको अनुशासन समितिमा भएका कारण रंगशालामा हामीलाई बस्ने ठाँउको व्यवस्थापन पनि त्यहीअनुसारको हुन्थ्यो। हामीलाई भिभिआईपीको स्थानमा राखिन्थ्यो। त्यही क्रममा मैले मैले थाहा पाए। अर्जेन्टिनाको खेल हेर्न म्याराडोना पनि आउँदैछन्।
विश्व फुटबलमा मलाई अरू खेलाडीले खासै प्रभाव पारेका छैनन्, तर म्याराडोनाबाट धेरै प्रभावित छु। पछिल्लो समय लियोनेल मेसीले मलाई केही प्रभाव पारेका छन्। होइन भने अन्य खेलाडीबाट म खासै प्रभावित छैन। म म्याराडोनाको ठूलो फ्यान हुँ। उनलाई भेट्ने मेरो ठूलो धोको थियो।
त्यसैले म्याराडोना आउने खबरले म धेरै उत्साहित भएँ। विश्वकपको खेलमा भन्दा पनि मेरो ध्यान म्याराडोनालाई कतिबेला भेट्न पाइन्छ भन्नेमा थियो। त्यसैले म्याराडोनाका लागि व्यवस्थापन गरिएको सिट खोज्न लागें। संयोग उनको लागि राखिएको सिट र मेरो सिट नजिक थियो। त्यसैले म्याराडोनासँग प्रत्यक्ष भेट हुने भयो भनेर म खुशी भएको थिए।
फिफाको अनुशासन समितिमा भएका कारण रंगशालामा हामीलाई बस्ने ठाँउको व्यवस्थापन पनि त्यहीअनुसारको हुन्थ्यो। म्याराडोना आउने खबरले म धेरै उत्साहित भएँ। विश्वकपको खेलमा भन्दा पनि मेरो ध्यान म्याराडोनालाई कतिबेला भेट्न पाइन्छ भन्नेमा थियो।
म्याराडोना र उनका साथीहरूलाई केही सिट छुट्याइएको थियो। खेल सुरु हुने बेलासम्म पनि म्याराडोना आएनन्। उनी नआएपछि मैले फिफा प्रतिनिधिहरूलाई सोधें– म्याराडोना त आएनन्। किन हो?
उनीहरूले जवाफ दिए– म्याराडोना आउँदा रंगशालामा दर्शकहरूको धेरै हो होल्ला हुन्छ। त्यसकारण उनी खेल सुरु भएपछि मात्र आउँछन्।
मेरो ध्यान खेलमा भन्दा म्याराडोना आउने ढोकामा बढी केन्द्रित थियो। अहिले आउँला, अहिले आउँला। उनी आउँदै आएनन्। मैले फेरि फिफाका प्रतिनिधिहरूलाई सोधे– खै त, म्याराडोना आएनन् त।
फेरि जवाफ आयो– होटलबाट हिँड्न लागेका छन्। केही समयमा आइपुग्छन्।
उनी आउने प्रतिक्षामै खेल सकियो। तर उनी आएनन्। यससँगै म्याराडोनालाई भेट्ने मेरो सपना पूरा हुन पाएन। २००२ को विश्वकपमा म्याराडोनालाई भेट्ने मेरो चाहना अपुरै रह्यो। अर्जेन्टिना समूह चरणबाटै बाहिरियो।
नेपोलीको रंगशालालाई म्याराडोनाको नामबाट नामाकरण गरिने!
त्यसको चार वर्षपछि २००६ को विश्वकप जर्मनीले आयोजना गर्ने भएको थियो। उक्त विश्वकपमा पनि म फिफाको अनुशासन समितिमै थिँए। जर्मनीमा पनि हामीलाई भीभीआईपीको स्थानमै राखिएको थियो।
संयोग कस्तो पर्‍यो भने, जर्मनीमा म्याराडोना र मेरो सिटसँगै पर्‍यो। म्याराडोना र मेरो बीचमा उनको छोरीको सिट थियो। दायाँ म्याराडोना, बायाँ सिटमा म।
त्यतिबेला भने म्याराडोना खेल हेर्न आए। उनी दुब्लाएका रहेछन्। त्यत्रो ठूलो प्रतियोगितामा म्याराडोना जिन्स पाइन्ट लगाएर आएका थिए। त्यो पनि ठाँउ ठाँउमा च्यातिएको थियो। त्यो बेलाको फेसन।
म्याराडोनाले लगाएको कपडा देखेपछि मलाई त कस्तो पागल जस्तो मान्छे रैछ यो भन्ने लाग्यो। म्याराडोना जस्तो मान्छेले लागएको ताल हेर कस्तो छ? भन्ने मनमा आइरह्यो। म बरु ‘सुटेट बुटेट’ भएर गएको थिए।
खेल सुरु भयो। अर्जेन्टिना र कुन देशको खेल थियो मलाई ठ्याक्कै याद भएन। तर खेल सुरु भएदेखी म्याराडोना कराउन थाले। कराउने, चित्याउने, रिसाउने गर्थे। त्यहा उपस्थित सबै जना म्याराडोनालाई हेरिरहेका थिए। खेलभन्दा म्याराडोनाको हाउभाउमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको थियो। खेलमा कमैको ध्यान थियो।
त्यसै बीचमा मैले म्याराडोनालाई फोटो खिच्नका लागि अनुरोध गरे। उनले मलाई बेवास्ता गरे। अर्जेन्टिनाको खेल भएका कारण पनि हुन सक्छ। उनले फोटो खिच्न चासो देखाएनन्। नेपालको खेल भइरहँदा कसैले मलाई फोटो खिच्नका लागि आग्रह गरेको भए सायद मलाई पनि झर्को लाग्थ्यो होला।
९० मिनेटको समयअवधिमा मैले करिब ४५ मिनेट जति म्याराडोनालाई फोटोको लागि आग्रह गरिरहें। उनी अंग्रेजी राम्रो नबोल्ने। त्यसैले उनको छोरीलाई पनि मैले धेरै अनुरोध गरें। तर म्याराडोना मानेनन्। आजित भएपछि छोरीले ‘बुबा मान्नु भएन। मसँग खिच्ने हो भने खिच’ भनिन्।
१५ मिनेटको मध्यान्तरमा कफी खाने बेलामा पनि मैले म्याराडोनालाई फोटो खिच्नका लागि अनुरोध गरें। तर पनि मानेनन्। उनको सुरक्षाकर्मीले मलाई तिमीलाई एकपटक भनेपछि लाग्दैन? कति लागिपरेको भनेर भनें।
म उनको ठूलो फ्यान थिएँ। म खेलाडी भएको भएर पनि होला। मलाई उनी प्रति ठूलो सम्मान थियो। मलाई उनी भगवान जस्तै लाग्थ्यो। त्यहाँ उपस्थित फिफाका अन्य पदाधिकारीले उनलाई त्यति वास्ता गरेनन्। उनीहरू समान म भने म्याराडोनासँग फोटो खिच्नका लागि मरिहत्ते गरिरहेको थिँए।
त्यस्तो गर्दा पनि मैले उनीसँग फोटो खिच्न सकिँन। तर, रंगशालामा उनले गरेको हाउभाउको भिडियो भने मैले क्यामरामा कैद गरें। त्यतिबेला अहिलेजस्तो सेल्फीको जमाना पनि थिएन।
म्याराडोना भन्ने वित्तिकै अहिले पनि मलाई त्यही पागलजस्तो कराइरहेको मान्छे सम्झन्छु। किन त्यस्तो रिसाएको होला? किन त्यस्तो कराएको होला? भन्ने लागिरह्यो।
पछि मैले थाहा पाएँ– त्यतिबेला मेसी उदाउँदो स्टारका रूपमा थिए। प्रशिक्षकले मेसीलाई बेन्चमा राखेका रैछन्। मेसीलाई किन नखेलाएको भनेर म्याराडोना रिसाएर कराएका रैछन्। आखिरमा अर्जेन्टिनाले त्यो खेल जित्न सकेन। रिसको झोकमा म्यराडोनाका साथीहरूले एकदुई वटा कुर्ची पनि भाँचे। त्यो दिन म फोटो खिच्न असफल भए।
अर्को दिन अर्जेन्टिनाको खेल हुँदा उनी आउँछन् र म फोटो खिच्छु भन्ने आशा थियो, तर उनी आएनन्। म्याराडोना किन नआएको भनेर मैले फिफाका प्रतिनिधिलाई सोधें।
जवाफ थियो– अघिल्लो खेलमा कुर्सी भाँचेका कारण म्याराडोनाका साथीहरूलाई प्रवेश अनुमति दिएनौँ। साथीहरूलाई प्रवेश नदिने हो भने म पनि आउँदिन भनेर म्याराडोना आएनन्।
पछि खेल दौरान रंगशालामा रहेको टिभी स्क्रिनमा यसो हरेको म्याराडोना त अर्जेन्टिनाको समर्थकहरूको बीचमा बसेर पो फुटबल हेरिरहेका रहेछन्। मलाई अचम्म लाग्यो।
यो विषयमा खुब चासो लागेर मैले फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटरसँग सोधे– यो के हो?
उनले भने– “यो मान्छे यस्तै हो। ही इज भेरी क्रेजी म्यान। मैले धेरै सम्झाए। एकछिन सम्झिए जस्तो गर्छन्। फेरी उस्तै हुन्छन्। इट्स इम्पोसिबल। तर यो मान्छेको बारेमा अर्जेन्टिनामा गएर एक शब्द पनि नराम्रो बेल्यो भने त्यो मान्छे जिउँदो फर्किएर आउन असम्भव हुन्छ।”
म्याराडोनाले त्यस्तो बेवास्ता गर्दा पनि मलाई त्यो घटनाले कुनै निराश बनाएन। उनीप्रति मेरो सम्मान कुनै कमी आएन। अझै पनि ती कुरा म गर्व साथीभाइलाई सुनाउँछु। केही साथीले मलाई गाली पनि गर्छन्। तर मेरो लागी उनी सदैव महान् खेलाडीका रूपमा सम्मानित छन्।
उनको निधनले मलाई स्तब्ध बनाएको छ। एउटा युगको अन्त्य भएजस्तो लागेको छ। मैले अर्का महान् खेलाडी पेलेलगायत विश्वका धेरै खेलाडीलाई भेटेको छु। तर, ती सबैभन्दा म्याराडोना नितान्त फरक लाग्यो। एकदम ‘मुडी’ स्वभावका।
(सुजन श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: बिहिबार, मंसिर ११, २०७७ १७:४९
त्यत्रो ठूलो प्रतियोगितामा म्याराडोना जिन्स पाइन्ट लगाएर आएका थिए।
विश्व फुटबलमा मलाई म्याराडोनाबाहेक अरू खेलाडीले प्रभाव पारेका छैनन्।
म्याराडोनाको मृत्युको खबरले मलाई स्तब्ध बनायो। एउटा युगको अन्त्य भएजस्तो लाग्यो।
अक्सिजन प्लान्टका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको १ करोड सहयोग
मंगलबार, माघ ६, २०७७ २०:४९